DAAWO+XOG: M/weynaha Puntland oo banaanka keenay Jawaab la yaab leh oo uu ka helay Madaxda DF Soomaaliya.
BOOSAASO(P-TIMES) – Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo ka hadlayay magaalada Boosaaso shalay ayaa daaha ka rogay in uu dadaal badan galiyey sidii wada hadalsiin looga dhex bilaabi lahaa Madaxda dawladda Faderaalka Soomaaliya & Jubbaland, wuxuuna sheegay in uu marar badan telfoon kula hadlay Madaxda dawladda.
Madaxweynaha Puntland wuxuu ka sheekeeyey waxyaabihii uu kusoo arkay magaalada Kismaayo, wuxuu aad uga hadlay ficilada dawladda Faderaalku ay qaaday oo uu sheegay in ay halis galinayaan Midnimada dalka.
Siciid Deni ayaa sheegay in madaxda dawladda markii uu la hadlay uu ka waayo war uu ku qanco oo ku wajahan xaaladdaha ka taagan Jubbaland, mar kastana ay ka hadlayeen oo kaliya arrinta ku wajahan sidii ay ku soo laaban lahaayeen.
Madaxweynaha Puntland ayuu sheegay in ay dadaal badan galinayaan sidii meelmar looga dhigi lahaa qorshaha dibu heshiisiinta, wuxuuna sheegay in uu ka niyadjabsan yahay habka ay Xukuumadda dhexe wax u wado.